Khabiir Isbarbar-dhigay Faa’iidada iyo Khasaaraha Ay Labada Hab-dawladeed Ee Wakiili Iyo Madaxtooyo Kala Leeyihiin | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Khabiir Isbarbar-dhigay Faa’iidada iyo Khasaaraha Ay Labada Hab-dawladeed Ee Wakiili Iyo Madaxtooyo Kala Leeyihiin
“Marka Ay Dawladnimada Casriga Ah Timaado Hab Dawladeedka Wakiiliga Ahi Waa Hab Guun Ah Oo Aad Uga Da’ Weyn Nidaamka Madaxtooyada” – Aqoonyahan Maxamed Xaaji Maxamuud
“Khaatumo, Furista Dastuurka Maxay Ka Maagan Tahay [WAAYO] Qaabka Uu Qaranku Hadda Ku Shaqeeyaa Waa Hab Ay Khaatumo Iyo Somaliland Oo Dhanba Ugu Badin Karto, Laakiin Haddii….”?
“Somaliland waxa ay Cali Khaliif iyo kooxdiisa Khaatumo kula heshiisay in dastuurka la furo si Somaliland loo wada yeesho. In dastuurka la furo oo qawaaniinta aasaasiga ah lagu heshiiyo waa wax wanaagsan horena waan u soo dhaweeyey. Laakiin, su’aasha iswaydiinta mudan waxa weeye, Khaatumo sidee ayey u rabtaa in Somaliland loo wada yeesho? Ma waxa ay u rabtaa in habka dawliga ah ee qaranku ku shaqeeyo ee Madaxtooyada ah (Presidential System) gabi ahaanba laga guuro? Ma waxa u muuqda in nidaamkan Madaxtooyada ahi aanu ku habbooneyn qarankan oo loo baahan yahay in loo ga guuro hab wakiili ah (Parliamentary System) oo Madaxweyne iyo Raysal Wasaare is toocsanaya ah? Waa sida ay u muuqato e, habkani ma yahay hab qaranka wadi kara oo himilooyinkiisa mustaqbalka uu kaga midha dhalin karo? Si aynnu su’aashan danbe uga jawaabno kuwa kalena u taxliilino marka hore aynnu isbarbar dhigno khasaaraha iyo faa’idada labada hab is-xukun ee aan kor ku xusay.
Hab dawladeedka Madaxtooyo; waa hab dawli casri ah oo awoodaha qaran leeyahay saddex dhadhaar la isugu geeyo, si qayaxanna shaqooyinkooda dastuurku u bayaamiyo. Tusaale ahaan Hay’aadka qaranka ee Somaliland waxa uu ka kooban yahay gole fulin, mid sharci dajin iyo hay’ad sharci oo tafsiisha sharciga guud ee qaranka, isla markaana xukunta waxa sharciga ah iyo wax aan sharciga ahayn (Maxkamadda Sare ee Dastuuriga ah).
Hab dawladeedka Wakiiliga ahi waa hab guun ah oo aad uga da’ weyn nidaamka Madaxtooyada marka ay dawladnimada casriga ah timaado. Habkani ma faa’ido la’ a. Wanaagga ugu weyn ee uu leeyahay waa in shuruucda dawliga ahi si degdeg ah loo ansixiyo loo na sameeyo. Sidoo kale waa hab ka nabad galay keli-talisnimo oo awoodda faraqa la wada haysto, maamulkuna uu aad u daadegsan yahay oo awoodda qaranku baahsan tahay.
Marka ay hawli halkaa taagan tahay, waa haddii ay Khaatumo rabto in nidaamkan dawliga ah ee hadda jiraa uu is-beddel u baahan yahay; waxa aan dawladda Somaliland u soo jeedin lahaa in arrintaa ay aad uga fiirsadaan. Hab wacan oo saami qaybsi ah oo ay ugu badin karto Khaatumo iyo Somaliland oo dhan ayuu leeyahay habka Madaxtooyada ahi.
Insha Allahu, dhawaan ayaan ka warrami sida ugu habboon ee ay Somaliland la wada leeyahay ugu dhismi karto iyada oo aan hab dawladeedkeenan casriga ah ee lagu liibaanay aan laga guurin.
Qalinkii: Maxamed Xaaji Maxamuud